A2 Zvakaita Bhaibheri Rino Rakadzokororwa — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro echiKristu echiGiriki yakabudiswa muChirungu muna 1950, uye Bhaibheri rese rakazara reShanduro yeNyika Itsva rakazobudiswa muna 1961. Kubvira ipapo, mamiriyoni evanhu vemitauro inopfuura 160 ari kubatsirwa nekuverenga shanduro iyi yakarurama inoverengeka zvakanaka yakashandurwa kubva mumitauro yakatanga kushandiswa pakunyora Magwaro.
Kwekutanga kweBhaibheri rino kune chikamu chakanzi, “Kusuma Shoko raMwari,” chinoratidza dzidziso dziri muBhaibheri dzinofanira kuzivikanwa nemunhu. Panoperera bhuku rekupedzisira reBhaibheri pane chikamu chinoti, “Kurongwa kweMabhuku eBhaibheri,” kwozotevera chinoti, “Indekisi Inobatsira Kutsvaga Mashoko muBhaibheri,” uye “Tsanangudzo Yemashoko emuBhaibheri.” Tsanangudzo Yemashoko inobatsira muverengi kuti anzwisise mamwe mashoko emuBhaibheri maererano nemashandisirwo aakaitwa muBhaibheri. Mashoko Ekuwedzera A ane zvikamu zvinoti: “Mashandurirwo Anoitwa Bhaibheri,” “Zvakaita Bhaibheri Rino Rakadzokororwa,” “Bhaibheri Rakasvika Sei Kwatiri,” “Zita raMwari muMagwaro echiHebheru,” “Zita raMwari muMagwaro echiKristu echiGiriki,” “Vaprofita neMadzimambo eJudha neIsraeri,” uye “Upenyu hwaJesu Panyika.” Mashoko Ekuwedzera B ane mamepu, nemamwewo mashoko anobatsira vanhu vanoda kuverenga Bhaibheri vachitsvakurudza.